पटका पट्काउँदै हुनुहुन्छ? प्रहरीको फन्दामा परिएला है :: PahiloPost
पटका पट्काउँदै हुनुहुन्छ? प्रहरीको फन्दामा परिएला है
5th November 2018, 02:30 pm | १९ कात्तिक २०७५
काठमाडौं: आजदेखि हिन्दुहरूको चाड तिहार सुरु भएको छ। तिहारको समयमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले विशेष सुरक्षा व्यस्थासमेत अपनाइसकेको छ। रमाइलो गर्ने बहानामा जुवातास खेल्ने, पटका पड्काउने र होहल्ला गर्नेलाई सार्वजनिक अपराधदेखि विस्फोटक पदार्थ ओसारपसारसम्मको मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले कहीकतै पटका, भुइचम्फालगायतका विस्फोटक पदार्थ पट्काउने तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने सिभिल प्रहरी परिचालन गरेको परिसरका प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले बताए। एसएसपी लामाले भने, 'हामीले तिहारलाई सुरक्षित बनाउने तयारी गरेका छौँ। कसैले पनि पटकालगायत प्रजल्वशील पदार्थ पट्काए तत्काल समातेर कारबाही गर्छैं।'
प्रहरीले राजधानी भित्रिने विभिन्न नाकामा पटकालगायतका पदार्थको चेकिङमासमेत कडाइ गरेको प्रहरीको दाबी छ। अहिलेसम्म प्रहरीले लाखौँको पटकासमेत बरामद गरेको एसएसपी लामाले जानकारी दिए। 'तपाईँको टोलमा कसैले पटका पट्काएको सुन्नु भयो भने हामीलाई खबर गर्नुहोला तुरुन्त कारबाही गर्छौँ।' एसएसपी लामाले भने।
त्यस्तै प्रहरीले देउसीभैलो खेल्न पनि निश्चित समय तोकेको छ। रातीको समयमा १० बजेदेखि देउसी भैलो खेल्न नखेल्नसमेत अनुरोध गरेको छ। एसएसपी लामाले भने, 'सुरक्षाको मध्यनजर गर्दै रातीको समयमा देउसीभैलो नखेल्न अनुरोध गरेका हौँ।'
जुवातास र ओखर खेल्ने समूहको पनि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ।
पटका पट्काउँदै हुनुहुन्छ? प्रहरीको फन्दामा परिएला है को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।